Akụkọ - CSM + WRE
E-Glass Chopped Strand Mat bụ akwa na-enweghị akwa nke nwere nkewa kesara na-enweghị atụ na-ejide ya na ntụ ntụ / emulsion binder.
Ọ dakọtara na UP, VE, EP, PF resins. Mpịakọta mpịakọta sitere na 50mm ruo 3300mm, ibu arọ sitere na 100gsm ruo 900gsm. Standard obosara1040 / 1250mm, mpịakọta ibu 30kg. Ezubere ya maka ojiji na aka-elu, filament winding, mkpakọ ịkpụzi na-aga n'ihu laminating Filiks.
1) Ọsọ ọsọ na styrene
2) Nnukwu ike ike, na-enye ohere maka iji usoro ntinye aka na-emepụta akụkụ buru ibu
3) Ezigbo mmiri-na ngwa ngwa mmiri-esi na resins, ngwa ngwa ikuku mgbazinye
4) Superior acid corrosion eguzogide
Ihe eji eme ihe gunyere ugbua, akwu mmiri, akpo di oku, akuku ugbo ala, ọkpọ oku na-eguzogide kemịkal, tankị, ụlọ elu dị jụụ na ihe eji arụ ụlọ
E nwere ọdịiche dị na ekweghị ekwe na nro nke iko fiber chopped strand mat, nke bụ n'ihi na ndị dị iche iche elu ọgwụgwọ mmadụ nke iko eriri. Ma ochie FRP, ha n'ozuzu dị ka softer chopped chere, nke na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịrapagide ebu na nkuku ọnọdụ. Nke a bụ ihe na-emegiderịta onwe ya. Ọ bụrụ na ọ dị nro dị nro, ọ pụtara na ute eriri ahịhịa afere na-adị nwayọ ma ọ bụ na enweghị eriri fọdụrụ, ọ nweghịkwa ụdị. Ihe nnọchiteanya ahụ bụ ntụ ntụ a na-egbutu ụdọ.
The emulsion chere bụ dịtụ ike, ma ọ bụ nnọọ ewepụghị. Imirikiti ndị ọrụ fiberglass dị ka emulsion chere n'ihi na ọ dị mfe ibelata ma faiba glaasi agaghị efe ebe niile.
Karịsịa n'ihe banyere obere okpomọkụ, eriri iko ga-esi ike karịa na mbụ. A na-atụkarị aro ka ị họrọ otu a: n'ihe banyere ngwongwo dị mgbagwoju anya na usoro ngwaahịa, ị na-ahọrọ ntụ ntụ ka ọ dị mma karịa, ọ dịkwa mma maka ịtọ akwa. Largefọdụ nnukwu, ezigbo usoro nke ngwaahịa n'ichepụta, ị na-eji emulsion chere ga-ngwa ngwa na ndị ọzọ ala.
E-Glass Woven Rovings are bidirectional fabric made by weweaving direct rovings. WRE dakọtara na polyester na-adịghị edozi, vinyl ester, epoxy na phenolic resins.
1) Uwe na weft rovings kwekọọ na a myiri na ewepụghị n'ụzọ, na-arụpụta edo esemokwu
2) Ihe eji eme ihe, na-eme ka nkwụsi ike dị ukwuu ma na-eme ka njikwa dị mfe
3) Ezi moldability, ngwa ngwa zuru ezu mmiri si resins, na-arụpụta na-arụpụta dị elu
4) Ezigbo ihe eji arụ ọrụ na ike dị elu nke akụkụ
WRE bụ arụmọrụ na-arụ ọrụ dị elu nke ejiri aka na aka na usoro robot iji rụpụta ụgbọ mmiri, arịa, ụgbọ elu na akụkụ ụgbọ ala, arịa ụlọ na ebe egwuregwu.
A na-enweta n'efu maka CSM na WRE. Enwere ike ịhazi obosara na oke ibu. Maka ozi ndị ọzọ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.